Pane imwe nzira yepamusoro yekusimudza zvangu PageRank ne backlinks?
Pane mazita anoverengeka aripo zvino anogona kushandiswa kukwidziridza zvichida peji reWebhuse kana bhuroji reRocklinks. Uye tisati tatanga, ngatitarisei - haugone kureva "skyrocket" yako iripo PageRank ne backlinks, zvisinei kuti yakaoma sei kana yakagadzirirwa sei inogona kuva. Ichokwadi kuti mapepa ako kumashure anomira pakati pezvinhu zvakakosha zvakakosha kana zvasvika pakukanganisa kunotarisa iyo inozopedzisira inogadzirisa peji rewebsite rako. Pakati pezvimwe zvinhu zvinotarirwa neongororo huru dzekutsvaga seGoogle, ndezvipi zvinotevera: vanobvumidza ivo pachavo, main target keywords, zvakasiyana nehuwandu hwehuwandu, uye zvimwe zvewebsite zvinhu zvisingashamisi mu SEO. Kudzokera kumashure - hazvisi nyore kuti pakarepo uvandudze PageRank yako ne backlinks. Asi basa racho richiri kugoneka, sezvo iwe uchida uye wakagadzirira kushanda nekushivirira pane yako yakareba kwenguva refu. Pasi pane dzimwe nzira dzakanaka dzekubatanidza chivakwa chingave chinokonzera kuti peji yako yakakwirira ive muGoogle.
Uye rega ndikupe shoko rekupedzisira rekuyevera - usaedza kuwedzera PageRank ne backlinks automation. Saka, apa ndiyo inofanirwa kuonekwa sekutanga uye yakakosha:
Ongorora zvimwe pamusoro pehutano, panzvimbo yehuwandu
Chirevo chepfungwa chinoita kuti shumba yegove ye SEO maitiro iri kutengesa pahutano chete. Taura zvakajeka, chinangwa chenyika yose che SEO ndechokuwana chigarire uye chinogara kwenguva refu chekutsvaga kuInternet paSERPs. Zvinosuruvarisa, vazhinji vanogadzira mablogi uye webmaster vanosangana nehutano vari kutarisana nechinetso chakakwana nekuvakwa kwekuvaka. Ndinoreva kazhinji kuti vanoisa zvakanyanya kuwanda, mune tariro yakaipa iyo inokonzera boka rakakura re backlinks kunze ikoko ichaita kuti zvikwata zvavo zvose zvikure. Asi ivo vanokanganisa zvakanyanya nokuti kuva nehuwandu hwakanaka kana husingabatsiri hakusi kungobatsira pasina SEO zvinangwa. Ichokwadi, kune mikana yakawanda yekuwana iwe unhu hwakanyanya huripo, panzvimbo yekufambira mberi. Mumamiriro ezvinhu akaipisisa, zvinhu zvose zvinogonawo kuguma nebvumo risingaperi pakutsvaga.
Libatanidza mukati memichero yako kana yebhizimisi
usamboita ichi chakaipa, sezvandakanga ndapfuura makore mazhinji akapfuura. Zvechokwadi, ndaiwanzoenda nenzira isina kururama yekuwana backlinks ku blog yangu - kungobatanidza kune imwe nzvimbo inoita sedare yakatendeseka yandakaona yakakosha kubata. Kuita kudaro, dzakawanda zvemashure angu akangobva kugadzirwa zvakakundikana kuva asina kukodzera - kurega zvose hazvina kusikwa mukati mekona yakanaka. Somugumisiro, ndakanga ndasara mutoro wakawanda wenguva uye simba - kuti ndirege kugumburwa kusina chairo chaicho mune PageRank kubva kumashure. Ndosaka ndisati ndapindira mumashoko uye nhaurirano dzehurukuro, ndinokurudzira zvakasimba kuti ndiongorore kaviri kuti zvitsva zvinowanikwa zvakakwana kune niche yako kana kugara mukati memabhizimisi mamwechete.
Handle Keyword Tsvakurudzo yekuchengetedza zvikwangwani zvakajeka
Zvakanaka, hapana chikonzero chekutaura kuti zvinyorwa ndeye mambo. Zvose pamusoro peSeO iri kutenderera zvakapoteredza kukodzera kwechokwadi kwemashoko makuru uye semantic yakakodzera yekuongorora. Ndizvo zvakaitawo mushure mega rega muhuwandu hwewebsite yewebsite, kana kuti mutsara wekunyorera kuti unyatsove. Zvinosuruvarisa, nzira imwe chete yekubata mu-yakadzama mazwi makuru ekutsvakurudza inowanzoregererwa. Ndicho chikonzero funga kunyora mabhuku ako emaoko zvakanyatsonaka sezvinobvira - kunyanya kushandisa AdWords kana imwe iyo yakanyanyisa yakawanda yekutsvakurudza zvidzidzo. Nenzira iyo, iwe uchava nechokwadi pamusoro pekukanganisa kunosangana nekuda kwekushayikwa kwekududzirwa kwayo mukutsvaga. Ingova nechokwadi chokuti uri kukwira-uye-zvino uye uchitevera zvose zvitsva zvekutsvakurudza uye semantic zvisikwa. Yeuka, magwaro maviri akafanana akafanana anchor anogona kupa chibvumirano nechose chakakwana chisingabatsiri chekugadzira, uye naizvozvo inogadzirisa zvachose PageRank munzira dzavo pachavo Source .